ʎloq-ɯɐlɐıɟ | Dago | 14
Otran'ny tsy dia nisy resaka firy teto @ media malagasy ny momba an'ny loka Mo Ibrahim. Nozaraina t@ alatsinainy io ary azon'ny ﻿﻿filohan'ny Cape Verde teo aloha Pedro Pires. Ny loka Mo Ibrahim moa dia atolotra an'ny mpitondra fanjakana Afrikanina izay voafidy ara-demokratika, nampiseho fomba fitondrana mendri-piderana ary indrindraindrindra nijanona t@ isa nomen'ny lalam-panorenana azy hahafahany milatsaka ho fidiana. Ny loka izany dia $5millions omena ao anatin'ny folo taona ary ihany koa $200.000 isan-taona mandra-pahafatiny. Afaka mangataka $200.000 isan-taona mandritra ny 10 taona ihany koa izy hoan'ny asa fanasoavana izay nofidiany hotohanana.
Dia hoy aho hoe tsara ampahafantarina ny mpanao politika malagasy angambany io. Satria tokoa ny ankamaroan'ny mpanao politika malagasy dia ny hoe hitadiavam-bola ny antony hanaovany politika. Dia io izany ny hoe safidy omena azy hoe ataovy tena mention tres bien ny fitondrana ny firenena ary aza manahy ny @ hoavinao fa io ny garanti fa tsy ho hahantra ianao. Mazava hoazy fa fomba fitondrana tena exemplaire no mila tratrarina eto fa tsy ny ala safay, fomba malagasy tsy hita izay maharatsy azy akory. Raisiko ho ohatra hoe ny filoha Botswanais teo aloha: Festus Gontebanye Mogae. Betsaka ny zavatra azo handokafana azy fa ny tena nahakirana ahy indrindra dia ny hoe ny azy tena nataony mihintsy izay hanasoavana ny vahoaka avy @ vokatra ara-mineralin'ny fireneny. Maro ny firenena Afrikanina hoe manana harena ankibon'ny tany fa ny ankamaroan'izy ireny dia ny mpitondra ihany no mahazo tombony. Ny azy kosa tena nataony mangarahara mihintsy hoe ny vahoaka no mahatsapa ny tena vokany...
Dia izay ee, ambava homana ampo mieritreritra. @ izao hoe fotoana hanombohan'ny hoe fifidianana sy hoe fotoana hanombohan'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany massive eto amintsika izao, asa ra mba tsapan'izay hirotsaka rehetra ny tena vokatsoa rehefa hoe ny vahoaka no mahatsapa ny fandrosoana. Izany no atao hoe fitiavana tanindrazana. Za aloha efa ela mihintsy no nametra-panotaniana hoe fa mba ahoana marina aza ny raisonnement an'ny mpitondra malagasy/afrikanina hoe tsy ngeza lavitra dia lavitra ve ny voninahitra sy rehareha raha ohatra ka hoe ho tsaroana @ hoe nitondra fandrosoana sy fivoarana @ firenena iray ianao noho ny hoe mambotry firenena, mahazo harena manokana goavana fa ho tsaroana @ fampahantrana ny vahoaka sy ny hoe voaongana... asa, tsy safidy tsotra sy mora ve izany? 10/12,2011 Sokajy Dago
Hevitra (9) «Mialoha 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 52 53 54 Manaraka»